अल्ट्रासोनिक साइज इंकको कटौती (उदाहरण इंकजेटको लागि) - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
मसी को अल्ट्रासोनिक साइज घटाउनुहोस् (उदाहरण को लागी इन्जेक्केट को लागि)
अल्ट्रासोनिक cavitation मसी मसीहरु को dispersing र माइक्रोग्राउंड (गीला मिलिंग) को लागि प्रभावी प्रभाव हो। यो प्रविधि यूवी-, पानी वा विलायक आधारित इनकिजे मसीहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अल्ट्रासाउन्ड कणको आकार घटाउन को लागी धेरै प्रभावकारी छ दायरा मा कणहरु को µ००µm देखि लगभग करीव। १०nm दायाँको ग्राफले ईk्कजेट स्याहीको Sonication को लागी एक उदाहरण देखाउँदछ (दाँया वक्र: Sonication अघि, बाँया वक्र: Sonication पछि)।
प्रक्रिया परिमितिहरू र नतिजाहरू नियन्त्रण गर्नुहोस्
कण आकार र मसी मसीहरु को कण आकार वितरण धेरै उत्पाद विशेषताहरु लाई प्रभावित गर्दछ, जस्तै कि ताकत या मुद्रण को गुणवत्ता। जब यो inkjet मुद्रण को लागी एक सानो मात्रा मा ठूलो कणहरु फैलावट अस्थिरता, अवशोषण वा inkjet नल विलम्ब हुन सक्छ। यस कारणका लागि यो inkjet स्याही गुणको लागि उत्पादनमा प्रयोग गरिएको आकार घटाउने प्रक्रियामा राम्रो नियन्त्रण छ।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरू सामान्यतया इन-लाइन प्रयोग गरिन्छ। Inkjet स्याही रिएक्टर पोत मा पम्प गरिएको छ। त्यहाँ यो एक नियन्त्रित तीव्रता मा अल्ट्रासोनिक cavation संपर्कमा छ। जोखिम समय रिएक्टर खण्ड र सामग्री फिड दरको परिणाम हो। इनलाइन Sonication को द्वारा द्वारा हटाईन्छ किनभने सबै कणों एक परिभाषित मार्ग अनुसरण रिएक्टर चैम्बर पारित। सबै कणहरू प्रत्येक चक्रको बखत उस्तै समयका लागि उस्तै Sonication प्यारामिटरहरूमा पर्दा, अल्ट्रासोनिकेसन सामान्यतया यसलाई विस्तारको भन्दा वितरण कर्भ बदल्छ। साधारणतया, “दाँया पकाउने” सनटेटेड नमूनेहरूमा हेर्न सकिँदैन।
तापमान-संवेदनशील वाहनोंका लागि, हेलसेस्टरले सबै प्रयोगशाला र औद्योगिक उपकरणहरूको लागि जैकेट प्रवाह सेल रिएक्टरहरू प्रदान गर्दछ। आन्तरिक रिएक्टर को पर्खालहरु को ठंडा गरेर, प्रक्रिया को गर्मी प्रभावी ढंग देखि फैल सकते हो।
तल चित्रहरू कार्बन ब्ल्याक वर्णक देखाउँछन् यूवी मसीमा फैलिएको छ। ठूला दृश्यका लागि तस्वीरहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।
अल्ट्रासोनिक भन्दा पहिले
विच्छेदन र कुनै पनि स्केल मा डीगलगोमेसन
हेलसिचले अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरूलाई मसीको प्रशोधनका लागि बनाउँछ कुनै भोल्युम। अल्ट्रासोनिक प्रयोगशाला उपकरणहरू 1.5mL बाट अनुमानहरूको लागि मात्राहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। 2L। औद्योगिक अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू प्रक्रियाको विकास र उत्पादनहरू ०. 0.5 देखि करीव २०००L वा प्रवाह दर ०.० बाट २० घण्टा प्रति घण्टा प्रति ब्याचको लागि प्रयोग गरिन्छ। अन्य फैलाउने र मिलिंग टेक्नोलोजी भन्दा फरक, अल्ट्रासोनिकेसन हुन सक्छ सजिलै उचाइयो। प्रयोगशाला परीक्षणले आवश्यक उपकरण आकार सही रूपमा चयन गर्न अनुमति दिन्छ। तल तालिका सामान्य यन्त्र सिफारिसहरू देखाउँछ जुन ब्याच भोल्युम वा प्रवाह दर प्रक्रियामा पर्दछ।
0.5 देखि 1.5 एमएल na VialTweeter
10 देखि 2000 एमएल 20 देखि 400 मिनेट / मिनट Uf200 ः टी, UP400S
0.1 देखि 20L 0.2 देखि4एल / मिनेट UIP1000hd, UIP2000hd
10 देखि 100 एल2देखि 10 एल / मिनेट UIP4000
स्वच्छ र सफा गर्न सजिलो
एक अल्ट्रासोनिक रिएक्टर को रिएक्टर पोत र अल्ट्रासोनिक को हुन्छन् सोनोट्रोड। यो एक मात्र भाग हो, यो पहनने विषय हो र यो सजिलै मिनेट भित्र प्रतिस्थापित हुन सक्छ। ओस्किलेशन-डेमोप्लिंग फ्ल्याङ्गहरू सोनोट्रोड मा कुनै पनि अभिविन्यासमा खुला वा बन्द प्रेसिजन कन्टेनर वा प्रवाह कक्षहरूमा माउन्ट गर्न अनुमति दिन्छ। कुनै बीयरिंग आवश्यक छैन। प्रवाह सेल रिएक्टरहरू सामान्यतया स्टेनलेस स्टीलको बनाइन्छ र साधारण ज्यामिति र हुन सक्छ सजिलै संग छुट्याउनुहोस् र सफा गरे। त्यहाँ कुनै सानो बाहिरी वा लुकेको कोनेहरू छैनन्।
अल्ट्रासोनिक क्लीनर स्थानमा
अनुप्रयोगहरू फैलाउने को लागी अल्ट्रासोनिक तीव्रता साधारण अल्ट्रासोनिक सफाईको लागी धेरै अधिक छ। यसैले अल्ट्रासोनिक पावर प्रयोग गर्न सकिन्छ सफाई सफा गर्नुहोस् फ्लुश र राइजिंग को समयमा, अल्ट्रासोनिक को रूप मा cavitation कण हटाउँछ र सोनोट्रोडबाट तरल अवशिष्ट र प्रवाह सेल पर्खालहरूबाट।
अल्ट्रासोनिक वितरणमा बढी जानकारीको लागि सोध्नुहोस्!
कृपया तल फारम प्रयोग गर्नुहोस्, यदि तपाईं अल्ट्रासोनिक्स प्रयोग गरेर मसी र सुँगुर प्रसोधनको बारेमा थप जानकारी अनुरोध गर्न चाहानुहुन्छ। हामी तपाईंलाई एक अल्ट्रासोनिक प्रणाली प्रस्ताव गर्न खुसी हुनुहुनेछ।
अल्ट्रासोनिकेटर यूपी २००२ (२०० डब्ल्यू) पानीमा कार्बन ब्ल्याक वितरण गर्दै १% डब्ल्यूटी ट्विन sur० लाई सर्फेक्टन्टको रूपमा प्रयोग गर्दै
तेल, साबुनको वा धूल हटाउन तार र केबल सफाई प्रणाली।
Biodiesel प्रक्रिया क्षमता
अल्ट्रासोनिक रिएक्ट्र्स उच्च biodiesel उपज लागि biodiesel रूपान्तरण सुधार
तरल प्रशोधन लागि अल्ट्रासोनिक Homogenizers
नानोडीडीज को अल्ट्रासोनिक संश्लेषण
र्याम्प-अप ढिलो र अपर्याप्त उत्पादन प्रक्रियाहरू
इलेक्ट्रोड सतह Fouling गर्न समाधान
अल्ट्रासोनिक सीornहरू प्रयोग गर्दै पावर अल्ट्रासाउन्डको अनुप्रयोग